Dahlan oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afgembigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga 2016… – Hagaag.com
Dahlan oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afgembigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga 2016…
Posted on 12 Seteembar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Website-ka Middle East Eye ayaa kashifay in Hogaamiyihii hore ee Fateh, Mohammed Dahlan oo laga eryey xarakada uu go’aansaday inuu ka laabto kiiskii ka dhanka ahaa Middle East Eye, oo ku eedeeysay inuu ku lug lahaa isku daygii afgambigii fashilmay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016, ka dib markii uu ogaaday inuu ku khasaarayo dacwada, oo ugu kici doonta nus milyan ginni khidmadaha qareennada.
Laba toddobaad kadib isku daygii afgambiga ee fashilmay ee ka dhacay Turkiga bishii Luulyo 2016, wariye David Hearst ayaa daabacay warbixin ka soo baxday Middle East Eye oo caddeynaysey Dahlan iyo Imaaraatka inay ku lug lahaayeen isku daygaas, isagoo tixraacaya warar uu ka helay ilaha amniga ee Turkiga.
Dahlan wuxuu bilaabay dacwaddan ku dhawaad ​​hal sano kadib, qareenadiisa ayaa sheegay in macamiilkoodu uu “xiriir caadi ah la leeyahay Imaaraatka”, maxkamada ayaa lagu waday inay dhacdo bisha November ee soo socota.
Sida laga soo xigtay shabakadda Middle East Eye, qareennada Dahlan ayaa soo gudbiyey ogeysiis ah in la joojiyo dacwadda, iyagoo aqbalaya mas’uuliyadda buuxda ee xagga kharashka sharciga ah, taas oo macnaheedu yahay in Dahlan uu bixin doono ugu yaraan £ 500,000 kharashaadka ku baxay qareenadiisa iyo qareennada difaaca.
Hearst ayaa ka hadlay dib-ula-noqoshada Dahlan dacwada in ay caddeyn u tahay runnimada warbixinta, oo wali ku daabacan bogga, isagoo sheegay in ku tala galka uu ahaa in lagu aamusiyo, iyada oo Dahlan ka laabtay dacwada kadib markii uu arkay inay diyaar u yihiin difaacida warbixinta.
Warbixinta ayaa sheegtay in Dahlan uu diray lacago uuna la xiriiray Fethullah Gulen oo ah mucaarad Turki ah oo deggen Mareykanka oo ah ninka ugu weyn ee lagu tuhunsan yahay inqilaabka, kadib todobaadyo kahor isku daygii afgambi ee fashilmay.